Yakavanzika Policy - Cape Town Vanachiremba Vanachiremba, Yakanyanya Google Chiyero, Indulgent Service
Yakavanzika Gwara reOptismile
Kana iwe zvinoda chero mamwe mashoko kana muine mibvunzo pamusoro yedu zvakavanzika mitemo, tapota inzwa wakasununguka nesu kubudikidza Email panguva https://optismile.co.za/contact-us/.
Ku https://optismile.co.za tinoona kuvanzika kwevashanyi vedu kwakakosha zvakanyanya. Iri gwaro repamutemo rekuvanzika rinotsanangura zvakadzama mhando dzeruzivo rwemunhu dzinotorwa nekunyorwa ne https://optismile.co.za uye mashandisiro atinoita.
Kufanana nemamwe maWebhu mazhinji, https://optismile.co.za inoshandisa mafaira erogi. Aya mafaera anongova matanda evashanyi kusaiti - kazhinji maitiro akajairwa emakambani ekubatira uye chikamu chekutora masevhisi analytics. Ruzivo irwo mukati memafaira erogi runosanganisira internet protocol (IP) kero, browser mhando, Internet Service Provider (ISP), zuva / nguva chitambi, kutaurisa / kubuda mapeji, uye pamwe nhamba yekudzvanya. Ruzivo urwu rwunoshandiswa kuongorora mafambiro, maneja saiti, kuteedzera kufamba kwevashandisi kutenderera saiti, uye kuunganidza ruzivo rwehuwandu. IP kero, uye rumwe ruzivo rwakadai haruna kubatana kune chero ruzivo rwunozivikanwa pachako.
→ Google, semutengesi wechitatu, inoshandisa makuki kushambadzira pa https://optismile.co.za.
→ Kushandiswa kweGoogle nekuki yeDART kunoigonesa kushambadzira kune vashanyi vesaiti yedu zvichienderana nekushanya kwavo ku https://optismile.co.za uye mamwe masosi paInternet.
→ Vashandisi vanogona kusarudza kunze kwekushandisa iyo DART kuki nekushanyira Google kushambadza uye zvemukati network zvakavanzika mutemo pane inotevera URL - http://www.google.com/privacy_ads.html
Vamwe vevatinoshamwaridzana navo vanogona kushandisa macokie uye mawebhu mabheikoni panzvimbo yedu. Vatinoshamwaridzana navo vanosanganisira …….
Nepo mumwe nemumwe wevashambadziro ava aine yavo Yakavanzika Policy kune yavo saiti, yakagadziridzwa uye yakabatana sosi inochengetwa pano: Privacy Policies.
Iwe unogona kutarisa kune ino zvinyorwa kuti uwane mutemo wega wega wega wega wevanoshambadzira vanobatana pa https://optismile.co.za.
Iwe unofanirwa kubvunza maringe nemitemo yakavanzika yeaya evatatu-bato ad server kuitira kuti uwane rumwe ruzivo nezve maitiro avo pamwe nemirayiridzo yekuti ungabude sei pane mamwe maitiro. Hwemutemo yekuvanzika https: //optismile.co.za haishande, uye hatigone kudzora zviitiko zvevamwe vashambadzi kana mawebhusaiti. Iwe unogona kuwana rondedzero yakazara yeaya maratidziro ehupfumi uye zvinongedzo zvavo pano: Yakavanzika Policy.
Kana uchida chokukuvadza makeke, unogona kudaro kuburikidza rako nomumwe Browser kusarudza. Uwane ruzivo pamusoro kudzayi zvakanaka chete dzakananga unorukwa browsers dzinogona kuwanika browsers 'dzaari Websites. Chii Cookies?
Isu tinotenda kuti zvakakosha kupa zvakawedzerwa kuchengetedzwa kwevana pamhepo. Tinokurudzira vabereki nevachengeti kushandisa nguva online nevana vavo kuti vacherechedze, vatore chikamu uye / kana kuongorora nekutungamira zviitiko zvavo zvepamhepo.
Iyi yekuvanzika mutemo inoshanda chete kune edu epamhepo zviitiko uye inoshanda kune vashanyi kune webhusaiti yedu uye zvine chekuita neruzivo rwakagovaniswa uye / kana kuunganidzwa ipapo.
Iyi bumbiro haishande kune chero ruzivo rwunounganidzwa kunze kwenyika kana kuburikidza nenzira kunze kweiyo webhusaiti.
Nekushandisa Website wedu, imi neizvozvo kubvuma kwedu zvakavanzika mutemo uye vanobvuma kuti mashoko acho.
Iyi Yakavanzika Policy yakagadziridzwa kuvandudzwa pa: 28 Gunyana 2020
Tinofanira kunatsurudza, Ruramisai kana kuita chero kuchinja edu zvakavanzika mutemo, kuchinja ivavo vachange vaiswa pano.